Yurub - ALinks
Maqaallada ku saabsan Yurub
Waxaa laga yaabaa 20, 2021 Antika Kumari Greece, shaqo, safarka
Haddii aad tahay muwaadin Mareykan, Kanada, ama muwaadin aan Midowga Yurub ahayn oo aad qorsheyneyso inaad u haajirto Griiga, waa inaad ogaataa in ruqsadda shaqada ee griiggu ay ku lug leedahay ku noolaanshaha iyo ka shaqeynta Giriigga. Marka intaadan shaqo ka raadin
Burushka cadayga korontada ee ugufiican UK
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 Maitri Jha UK, waxyaabo waxtar leh
Raadinta Jimicsiga Fiican ee Ka Yar 50 !!
Waxaa laga yaabaa 4, 2021 Shubham Sharma safarka, UK, waxyaabo waxtar leh
Kooxaha casriga ah ama waxaan dhihi karnaa kooxaha jirdhiska ayaa soo maray waddo aad u dheer sannadihii la soo dhaafay. Qaar badan oo jimicsiyayaal jimicsi caadi ah maanta waxay la socon karaan talaabooyinka la qaaday, masaafada safarka, gubida kalooriga, iyo xitaa caadooyinka hurdada, oo aan mar dambe la ammaanin
Sidee shaqo looga helaa Jarmalka? Tilmaame dhakhso leh oo loogu talagalay ajaanibta iyo dadka Jarmalka deggan
Waxaa laga yaabaa 2, 2021 alinks Germany, shaqo
Si aad shaqo uga hesho Jarmalka, qof walbaa wuxuu u baahan yahay marka hore inuu shaqo ka helo Jarmalka. Waxaad ka raadsan kartaa shaqo meel kasta, ha ku noolaado Jarmalka ama dibedda. Waxay kuxirantahay dhalashadaada, sidoo kale waad imaan kartaa Jarmalka
Xisaabiyaha Sayniska ee ugu Fiican Ardayda!
April 26, 2021 Shubham Sharma UK, waxyaabo waxtar leh
Xisaabiyayaal cilmiyaysan ayaa loo adeegsadaa xalinta dhibaatooyinka aljabrada, sayniska, iyo injineernimada. Xisaabiyaha xisaabeed wuxuu xallin karaa trigonometry, logarithm, iyo dhibaatooyinka suurtagalnimada marka lagu daro howlaha xisaabeed ee fudud. Qalabka Texas, Casio, iyo Sharp waxay si isdaba joog ah u soo saareen xisaabiyayaal tayo sare leh sanad kadib
Qalabka ugu Fiican Smart
April 21, 2021 Shubham Sharma UK, waxyaabo waxtar leh
Adduunyada maanta casriga ah, wax walbaba caqli ayey ku socdaan. Laga soo bilaabo safarka ilaa aaladaha, waxyaabaha oo dhan waxay ku sii kordhayaan casri iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyaddii ugu dambeysay. Halkan, waxaan ka hadleynaa shey kale oo caqli badan oo ay saameyn ku yeesheen tikniyoolajiyadda
1 2 3 ... 23 Xogta ku xiga»